Mitovy fiovam-po ve ny fanehoan-kevitra? | Martech Zone
Mitovy fiovam-po ve ny fanehoan-kevitra?
Talata, Oktobra 14, 2008 Alakamisy Oktobra Oktobra 3, 2019 Douglas Karr
Nanao famakafakana ny bilaogiko aho tamin'ny faran'ny herinandro mba hikarohana fifandraisana misy eo amin'ny valin'ny motera fikarohana ahy, ireo bilaogiko malaza indrindra, ireo lahatsoratra misy fanehoan-kevitra betsaka indrindra, ary ireo lahatsoratra izay tena niteraka fidiram-bola noho ny fifampidinihana na fifampiresahana.
Tsy nisy fifandraisana.
Raha mandinika ireo lahatsoratro malaza indrindra ianao dia hahita endrika mifandraika amin'ny WordPress, Huntington Bank Sucks, nandao an'i Basecamp aho, ary ny halavan'ny adiresy mailaka no nitondra ny fifamoivoizana betsaka indrindra. Ireo lahatsoratra ireo no mitarika ny valin'ny Search Engine. Ireo lahatsoratra ireo koa dia mitondra ny fanehoan-kevitra betsaka indrindra. Saingy, ireo lahatsoratra ireo dia tsy nanome afa-tsy trondro dolara (sy kafe roa kaopy) ho an'ny paosiko.
IMHO, mampiasa fanehoan-kevitra ho refy fahombiazana tokana dia mahazatra, fa mitarika mankany amin'ny ny ankamaroan'ny bilaogy orinasa tsy nahomby.
Manodidina ny 1 isaky ny 200 ny mpitsidika tonga ao amin'ny bilaogiko ary mamela hevitra. Ny ampahany kely amin'izy ireo dia mahatsikaiky, ny ankamaroany dia olona ifandraisako manokana… ary vitsy dia vitsy, raha misy, manao raharaha miaraka amiko. Raha ny marina, ny iray amin'ireo fifanarahana lehibe indrindra nananako tamin'ity taona lasa ity dia avy amin'ny lahatsoratra iray izay naneho ny fahaizako amin'ny haitao manokana (ary nalahatra tsara), saingy tsy nisy hevitra na inona na inona.
Fiovam-po amin'ny familiana
Mazava ho azy fa tsy ny fitorahana bilaogy no olana. Manana mpamaky be dia be ao amin'ny bilaogiko aho - saingy tsy mitohy ny fanoratana atiny tsy tapaka ireo lohahevitra izay mitondra fiovam-po amiko. Ary koa, tsy manana antso ho amin'ny hetsika eo amin'ny sisiny aho.
Norefesiko foana ny fahombiazako tamin'ny isan'ny mpanjifa RSS sy ny firotsahana (tamin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny bilaogiko). Averiko jerena io paikady io! Raha te hitarika fidiram-bola aho ary hampiasa izany ho bilaogy fandraharahana, mila mikendry ny atiny aho handresy amin'ny fikarohana amin'ny teny mifandraika amin'izay mitondra fidiram-bola. Mila manome ihany koa aho lalana ao amin'ny tranokalako haka sy handrefesana ireo fiovam-po ireo.
Tsy mino aho fa mitovy ny fiovan'ny hevitra, ary tsy tokony ho refesin'ny fahombiazan'ny bilaoginao koa izany.
Raha tsy hoe afaka mampifanaraka ny hetsika amin'ny valin'ny orinasa ianao, dia metrika tsy misy dikany fotsiny izany. Tsy hoe tsy te-hanome hevitra aho… fa tsy hampiasa fanehoan-kevitra ho mariky ny fahombiazan'ny bilaogiko.
Tags: haino aman-jery sosialy mandrosofahombiazanaMichael Stelznerfandoavam-bola amin'ny findaypage speedUnsubscribewikiality
Makà Wii avy amin'i Noobie!
Ireo manam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialy ao an-tokotaninao!
14 Okt 2008 amin'ny 2:25 PM
Te-ho voalohany aho haneho hevitra momba ny tsy maha-zava-dehibe ny fanehoan-kevitra. Lahatsoratra mahafinaritra!
14 Okt 2008 amin'ny 4:40 PM
Ekeko fa tsy ny fanehoan-kevitra ihany no mandrefy ny fahombiazana.
Misy fahafahana lehibe hamolavola marika amin'ny alàlan'ny fitorahana bilaogy. Orinasa famolavolana sy fanorenana izahay izay miompana amin'ny fiangonana. Manavaka isika amin'ny alalan'ny fampivelarana fahalalana sy fahatakarana bebe kokoa momba ny mpanjifan'ny fiangonana noho ny ananany. Ny bilaoginay dia ahafahantsika mampiseho izany fahalalana izany ary mandray anjara amin'ireo ekipa mpitarika ao amin'ny fiangonana amin'ny resaka izay antenaina fa hampitaovana azy ireo bebe kokoa amin'ny asa fanompoana. Ny bilaoginay dia miasa ho toy ny ampahany amin'ny paikadinay mba hanaovana izany amin-kery kokoa.
Ny fotoana dia hanambara ny sanda feno.